Safaaradda Mareykanka oo ku baaqday in lagu laabto wada hadalka | KEYDMEDIA ONLINE
Safaaradda Mareykanka oo ku baaqday in lagu laabto wada hadalka
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, ayaa Farmaajo iyo Rooble ugu baaqday in dib ugu laabtaan miiska wada hadalka, waxayna dhinacyada isku haya Muqdisho ugu baaqeen in ay ka waantobaan xasaradaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - War ka soo baxay Safaaradda dalka Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Muddadu ka dhamaatay Farmaajo iyo Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Rooble, loogu baaqay in ay in ay dib ugu laabtaan wada hadallada, si loo xalliyo rabshadaha ka dhashay is mari waaga doorashooyinka.
Mareykanku wuxuu sheegay in is mari waaga siyaasadeed ee taagan uu wiiqayao rajada Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in dhinacyadu ka waantoobaan rabshadaha.
"Khilaafka siyaasadeed wuxuu burburinayaa rajada Soomaaliya, waxaan mar labaad ka codsaneynaa dhamaan dhinacyada inay ka waantoobaan rabshadaha". Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Safaaradda Mareykanka.
Farmaajo iyo Rooble oo laga wacay qoraalka, ayaa loogu baaaqay in ay dib ugu laabtaan miisaka wada hadalka, mar kalana hor fariistaan, hoggaamiyayaasha Maamul goboleedyada, taas oo ay loo arko xalka kaliya ee lagu gaari karo heshiis buuxa.
"Waxaan mar kale ugu baaqeynaa Farmaajo iyo Rooble, inay dib u bilaabaan wadahadalkii ay la lahaayeen madaxda Dowladaha Xubnaha Ka ah Dowladda Fadaraalka, taas oo ah waddada kaliya ee horay loogu socon karo". Ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka.
Wararka ka soo baxaya, dalalka reer galbeedka ee Mareykanku ugu weyn yahay ayaa u muuqda kuwa isku mid ah oo aan hore u socod gooni ah lahayn, waxayna kaliya ku celiceliyaan dib haloogu laabto wada hadalada, taas oo Farmaajo uu si buuxda u dafiray dhowr jeer.
Heshiis laga gaaray qalalaasihii Muqdisho ka dhacay
Warar 5 May 2021 18:12
Heshiis ka kooban 10 qodob ayaa laga soo saaray shirkii galabtay ku dhexmaray magaalada Muqdisho guddigii farsamada ee uu RW Rooble magacaabay ayna goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan.
Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka oo shiray
Warar 5 May 2021 16:54
Guddigii farsamada ee Rooble magacaabay oo la shiraya Qoorqoor iyo Guudlaawe
Warar 5 May 2021 16:05
PM Roble meets with foreign diplomats in Mogadishu
Warar 5 May 2021 15:24